Warbixin: Shirka Nairobi ee wada-tashiga iyo aragtida dhinacyada. – Radio Daljir
Garoowe, April 04 – Tan iyo intii uu wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay (QM) ee arrimaha Soomaaliya Augustine Mahiga uu shaaciyay shirka heerka sare ee wada-tashiga arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan xilliga kala-guurka, ayaa waxa jawaabo kala duwani ay ka soo baxayaan dhinacyada ay casuumaddu ku socotay.
Jahwareerka ugu wayn ayaa waxa uu ka jiraa dhinaca hay’adaha dawladda federaalka KGM ah ee Soomaaliya. Madaxwayne Shariir iyo xukuumaddu labaduba si cad ayay uga horyimaadeen casuumadda iyo qasdiga ka dambeeya labadaba. Guddoonka barlamaanku arrin caadi ah ayuu ku tilmaamay ka qayb-galka shirkaas haseyeeshee ogolaasho buuxda lagama maqal. Si kastaba ha ahaatee, xubno badan oo ka tirsan barlamaanka oo ay ku jiraan hoggaanno ayaa dhabarka u duway shirka. Qaar baa leh, madaxda haykallada dawladdu nama matalaan, nagamana war-hayaan, sidaa darteenka ku talinaya barlamaanka Muqdisho haloogu yimaado.
Somaliland sidii laga filikaray waa ay ka hortimid casumaadda wayna qaaddacday ka qaby-galka. Sidoo kale waxa shirka diiday Alshabaab oo aan markii horeba lagu casumin.
Puntland iyadu asalkaba in la isku yimaado ayaa ka go’nayd inkasta oo ay jeclayd in Gaorowe madashu noqoto, yeelkeede, shirkan waxa ay ku tilmaameen mid wada-tashi ah oo aan ka hor imaanayn qorshohoodii in shir la isugu yimaado Garowe looga tasahdo aayaha.
Inkasta oo uu shirku yahay mid ay hoggaanka u hayso beesha caalamka, haddana Jaabuuti ayaa u muuqata jifida kaliya ee ka tirsan beeshaas misana qaadacday shirka.
Xaliima Cabdullaahi Cali ‘Xaliima Sacdiya’ ayaa warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka diyaarisay shirkan iyo duruufaha ku meeraysan iyo waliba aragtida dhinacyada.